Madxtooyada Soomaaliya oo beenisay wararka sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in ay badasho mowqifkeeda ku aadan kiiska horyaalla maxkamadda ICJ - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadxtooyada Soomaaliya oo beenisay wararka sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in ay badasho mowqifkeeda ku aadan kiiska horyaalla maxkamadda ICJ
Sumada madaxtooyada Soomaaliya.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxtooyada Soomaaliya ayaa beenisay wararka sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in ay badasho mowqifkeeda ku aadan kiiska horyaalla Maxkamadda Caddaaladda Adduunka ee ICJ, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska warfaafinta madaxtooyada.
“Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa baaritaan ku haya ilaha wararkan been abuurka ah.” Ayaa lagu yiri.
Soomaaliya ayaa cabashadeeda ku saabsan muranka badda ee kala dhaxeeya Kenya u gudbisay maxkamada ICJ sanadkii 2014.
Go’aanka maxkamada ICJ ee muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa la filayaa in ay uu soo baxo bisha September ee 2019.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Soomaaliya ayaa isku raacay in dhiibistii Qalbi-dhagax ee Itoobiya ay ahayd “sharci daro”. Guddi baarlamaanka uu u xilsaaray baaritaanka dhiibistii Qalbi-dhagax ayaa maanta oo maanta oo Sabti ah baarlamaanka kahor akhriyay natiijadii [...]